CO₂ Laser loogu talagalay Warshadaha Dharka iyo Dharka - Goldenlaser
CO₂ Laser loogu talagalay Warshadaha Dharka iyo Dharka
CO₂ LASER EE DHARKA
LASERKA DAHABKA ah wuxuu dhisaa mashiinnada laser-ka ee 'CO for laser' si loo gooyo hal daar, xariijimo iyo maryo caag ah, maryo daabacan iyo gaar ahaan caadooyinka la sameeyay oo keliya.
MTM-hufan oo sarreeya (oo la sameeyay-si loo cabbiro) oo leh nidaam goyn laser oo caqli badan.
Hadafka: Wax ku ool ah / Keydinta Qalabka / Badbaadinta Shaqada / Tilmaamaha Zero / Sirdoonka
Goynta Laser iyo Xardho Warshadaha Dharka
Iyada oo caan ku sii kordheysa dharka, dharka iyo dharka dharka ayaa si dhakhso leh u kobcaya. Waxayna noqoneysaa mid kuhaboon geedi socodka warshadaha sida jarista iyo xardho. Sintetik iyo sidoo kale qalabka dabiiciga ah ayaa hadda badanaa la gooyaa oo lagu xardhay nidaamyada laser . Laga soo bilaabo dharka tolida leh, dharka mesh, dharka laastikada, tolidda dharka si aan loo gaarin iyo walxaha jilicsan, ku dhowaad dhammaan noocyada dharka ayaa lagu farsameyn karaa laser.
Dawaarka Dhaqanka VS. Jarida Laser
Jaangooyada caadiga ah, goynta gacanta ayaa ah tan ugu ballaaran ee la isticmaalo, oo ay ku xigto jarista farsamada. Labadan hab ee wax lagu farsameeyo labadaba waxaa lagu dabaqaa shaqeynta goynta mugga sare leh, saxsanaanta jaristeeduna ma badna. Mashiinka goynta laser-ku wuxuu ku habboon yahay mug-yar, tolmo kala jaad ah oo dhar kala duwan leh, gaar ahaan moodada dhaqsaha badan iyo dharka caadada ah.
Traditional manual cutting has a high demand on the pattern cutter and burrs after cutting. Laser cutting has a high consistency and automatic edge sealing.
In addition, we provide CAD design, AUTO MARKER, automatic grading, automatic photo digitizer software with laser cutting to achieve automated processing.
Maxaad ugu dooraneysaa leysarka dharka caadada ah?
DAHABKA GOLDEN wuxuu dhisaa xalalka leysarka ee ku habboonaanta shaqsiyadeed ee moodada iyo warshadaha dharka.
Marka la barbardhigo goynta qalabka, goynta leysku waxay leedahay faa'iidooyinka saxsanaanta sare, isticmaalka yar, geesaha la gooyey oo nadiif ah, iyo geesaha si otomaatig ah loo xiray.
Buul si toos ah, quudinta si toos ah iyo goynta laser joogto ah, la jaan qaada wax soo saarka mass iyo sampling, badbaadinta shaqooyinka faafinta Buugga iyo samaynta hannaankii.
Adeegso softiweer buul-xirfadeed xirfadeed si aad ugu kordhiso ka faa'iideysiga qalabka ugu yaraan 7%. Masaafada eberka ee udhaxeysa qaababka ayaa noqon kara wax la wada jaro.
Xirmo softiweer ah oo xirfadle ah, oo si fudud loo gaari karo qaabeynta qaabeynta, sameynta sumadeeyaha, digitizer sawir iyo qiimeynta. Xogta qaabku way fududahay in lagu maareeyo kombuyuutarka.
Godad (daloolin), xariijimo, godad, xardho, xagal goynta gogosha, farsamaynta qaabka dheer-dheer, mashiinada leysarka ayaa si fiican wax uga qaban kara wixii faahfaahin ah.
Waxaa naga go'an inaan kaa caawinno inaad horumariso oo aad cusboonaysiiso wax soo saarkaaga si sahlan oo ka sii fiican nidaamyadeena kala duwan ee leysarka.
Our CO 2laser waa fiican ee jarida iyo xardho tiro balaadhan oo ah dhar iyo dhar.
Iyada oo CO 2laser for mood and warshadaha dharka', maryaha hal-lugta ah ayaa si dhakhso leh oo hufan loo goyn karaa leysarka, iyo sidoo kale xardho iyo daloolin jilicsan oo duuban si loo rogo. Sidaa darteed waxaad ku guuleysan kartaa wax soo saar leh laser halkii aad ka heli lahayd mindi.
Ka faa'iideyso 2 laser Laser, si aad hoggaamiye ugu noqoto suuqaaga.
CO 2flatbedka leh
Galvo laser gal duub si loo rogo goynta iyo mashiinka xardho
CO 2 laser magaabay for plaids iyo strips dhar
Vision magaabay wiil laser for dhar daabacan
Mashiinka goynta Laser ee warqad yar oo iftiimisa
Maro noocee ah ayaa ku habboon howsha laser-ka CO2?
Polyester, Aramid, Kevlar, dhogor, Cotton, Polypropylene, Polyurethane, Fiberglass, Spacer difaan, Felt, Silk, Filter flece, textiles textiles, synthetic textiles, Foam, Fleece, Velcro wax, dhar tolmo ah, dhar mesh, Plush, Polyamide, iwm .
Waxaan kugula talineynaa mashiinada leysarka soo socda
ee loogu talagalay warshadaha dharka iyo dharka
Mashiinnada leysarka CO2 ee laser-ka dahabka ah ayaa ku habboon goynta iyo xardhashada dharka iyadoo la adeegsanayo saxsanaanta iyo dabacsanaanta wax soo saarka.
Xawaaraha sare ee mashiinka laser-ka saxda ah ee dharka iyo dharka leh gawaarida iyo qalabka wax lagu xiro. Gear iyo hayayaashii waday.
Mashiinka Goynta Laser iyo Daloolinta Lasvo
Mashiinka leysarka badan ee sameyn kara goynta leysarka, xoqitaanka iyo daloolinta funaanadaha, polyesterka, microfiber, xitaa dhar fidsan.
Dual Head Camera Laser magaabay
A magaabay laser xoog leh oo wejiyo badan leh nidaamka madax-goynta madaxa laba-geesoodka madax-bannaan iyo nidaamka aragtida caqliga leh ee goynta dusha.